डा.सिके राउतको जीवनीमा ‘डा. सिके राउत : द प्यासन’ नामक चलचित्र निर्माण हुने – Namaste Filmy
स्वतन्त्र मधेसको एजेण्डा छाडेर मूलधारको राजनीतिमा आएका जनमत पार्टीका संयोजक डा.सिके राउतको जीवनीमा आधारित रहेर चलचित्र निर्माण हुने भएको छ ।बुधबार राजधानीमा एक कार्यक्रमकाबीच राउतकै उपस्थितिमा चलचित्र निर्माणको औपचारिक घोषणा गरियो । चलचित्रको नाम ‘डा. सिके राउत : द प्यासन’ राखिएको छ ।
कार्यक्रममा चलचित्रको टीजर समेत सार्वजनिक गरिएको थियो । सन्तोष साहले निर्देशन गर्न लागेको चलचित्रमा राउतको भूमिका भोजपुरी चलचित्रका चर्चित अभिनेता परदेशी साहले निर्वाह गर्नेछन् । चलचित्रलाई बाबु नामक ब्यक्तिले निर्माण गर्न लागेका हुन् ।
चलचित्रमा अभिनेता परदेशीका साथमा कलाकारहरु पुकार भट्टराई, धु्रव कोइराला, विशाल पहाडी, किरण थापा, राजिव कर्ण लगायतको अभिनय रहनेछ । केही कलाकार छनोट हुन बाँकी रहेको कार्यक्रमममा जानकारी दिईयो ।
कार्यक्रममा डा. सिके राउतले आफ्नो जीवनी बुझ्न चलचित्रले मद्धत गर्ने विश्वास ब्यक्त गरे । निर्देशक साहले चलचित्र ५० प्रतिशत कथा डा. सिके राउतमा आधारित हुने र बाँकी चलचित्रका लागि आवश्यक काल्पनिक कथालाई जोडिने बताए ।
भदौं पहिलो साताबाट छायांकन हुने चलचित्रको बजेट डेढ करोड अनुमान गरिएको छ । नेपाली, भोजपुरी र हिन्दी भाषामा तयार हुने चलचित्रको नेपाल प्रदर्शन मिति छठमा तोकिएको छ ।